क्यान्सरपीडित सुर्जकली आर्थिक अभावले अस्पतालमा छटपटाउँदै « News24 : Premium News Channel
मुगु । जुम्ला जिल्ला कनका सुन्दरी गाँउपालिका– ३, बुढु गाँउकी ३५ वर्षीय सुर्जकली बुढा क्यान्सरसँग लड्दै छिन् । आर्थिक अभावकै कारण उपचार उनी अस्पतालको शैय्यामा छपटाई रहेकी छन् ।
लामो समयसम्म माथिल्लो र तल्लो पेटको दुखाइ खेप्दै आएकी सुर्जकलीलाई उपचारको लागि चितवन भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दा पाठेघरमा क्यान्सर भएको चिकित्सकले भनेका थिए ।
गरिब परिवारकी सुर्जकली सामान्य उपचार खर्चसम्म नपाएर चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको एक बेटमा छटपपटाई रहेकी छन् । बिहान बेलुका छाक टार्नसमेत धाैँ धौँ हुने परिवारकी बुढालाई क्यान्सर देखा परेपछि कसरी उपचार गर्ने भन्दै परिवार पीरमा छ ।
उनको उपचारका लागि गाउँको दुई पाटा खेतसमेत बिक्री गरियो । तर, बिक्री गरिएको खेतको पैसा पनि सकिएपछि अहिले खर्च जोहो गर्न नसकेको उनको श्रीमानले दुःख पोखे ।
सुर्जकलीकी श्रीमान पैसाकै अभावका कारण श्रीमती गुमाउने डरमा छन् । तैपनि हिम्मत हारेका छैनन् तर, रकम जम्मा कसरी गर्ने उनलाई बडो पीर छ ।
उनी भक्कानिँदै भन्छन्, ‘आफन्तको सहयोगले जसोतसो धाँनिरहेको छु । अब, थप सहयोग माग्न पनि कहाँ जाउँ ? कस्ले देला र ! यो दुँनियामा गरिबको को रहेछ र !’ क्यान्सरपीडितलाई सरकारले पनि हेर्ने भनिए पनि सुर्जकलीलाई सरकारले देखेको छैन ।
२ छोराकी आमा सुर्जकली अहिले आफन्तको सहयोगले अस्पतालको बेडमा सास फेरिरहेकी छन् ।